China Umgangatho oPhezulu woPhuculo loKhuseleko oluKhulu oluKhulu kunye noLawulo lweQela oluPhezulu lwePlagi yeWifi abavelisi kunye nabaxhasi | IQHAZA
ISICWANGCISO SESIKHATHI: Yenza ishedyuli eyenziwe ngokwezifiso kwi-APP ukuvula ngokuzenzekelayo / ukucima izixhobo zasekhaya ezifana netanki yentlanzi, isixhobo somoya, izibane zeKrisimesi, umenzi wekofu, abalandeli, njl.Ukulinganisa: 120V, 60Hz, 15A / 1800W.
ULAWULO LWEVO: Ukunyanga ixesha lesitishi sombane sisebenza kunye noMncedisi kaGoogle kunye noMncedisi kaGoogle, kulula ukuseta kunye nokusebenzisa, ungene nje, kwaye ubhangane kwi-Alexa, nika umyalelo welizwi olulawulayo ukulawula izixhobo zakho zasekhaya. "Alexa, vula umenzi wekofu ngoku" "Kulungile".
ULAWULO LWAKUDALA: Lawula izixhobo zakho zasekhaya naphina. Nokuba awukho ekhaya, unokulawula ukuphuma kwakho kwexesha elifanelekileyo nge-APP ngqo, ukunqanda amatyala aphezulu emandla kunye neengozi zomlilo. Unokuseta ukuTshixa koMntwana, ukuthintela abantwana ekusebenzeni kwiplagi ye-timer ngempazamo.
UKUQEQESHA NOKWABELA: Yenza iQela kwi-APP yakho, qhagamshela iplagi ezininzi kwizibali kwigumbi elinye, ukuze ukwazi ukuyicima okanye ukuyicima yonke into ngaxeshanye ngesandla okanye nge-APP. Yabelana nge-timer plug yakho kumalungu osapho ngokufutshane njengomzuzu omnye.
IMODE YOKUSETYENZISWA: Seta isibali seplagi vula okanye ucime izinto zakho ngokungacwangciswanga ukuze kubonakale ngathi usekhaya nokuba awukho, ukunqanda abangeneleli, ukunqanda ukulahleka kwepropathi kunye neendleko zokuba nombane.
Isiqinisekiso Iinyanga ezi-3-unyaka omnye
Isiqinisekiso Iqela leCCC / ROSH / ETL
Indawo yokuQala China
Igama lebrand IQHAZA
Inombolo yomzekelo I-SNW-212
Chwetheza Xhuma ngeSocket
Ukubeka phantsi Umgangatho osezantsi
Kulinganiswe ngoku 10A / 16A
Ukusetyenziswa Indawo yokuhlala / iinjongo ngokubanzi
I-Voltage yokuSebenza AC100-240V 50 / 60Hz
Izinto zeShell Ikhompyuter
Ukufuma kokusebenza <80%
Ukusebenza kobushushu -20 ℃ / + 50 ℃
Egqithileyo Umgangatho ophezulu wexabiso eliphantsi kwi-Wholesale nge-State-Feedback Smart Plug Wifi US
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu weVenkile yexabiso eliphantsi yoLawulo lweSoftware eyi-Mini Wifi Smart Plug 16A Inkxaso yokuTshintsha amandla
Inkxaso yeMveliso ePhakamileyo yeAmazon kunye nezinye i ...
Quality High Ihowuliseyili Custom Lixabiso Plug-in 3 U ...
Umatshini oPhezulu oPhezulu weeMitha eziMandla oMbane ...
Umgangatho oPhezulu oPhezulu woMgangatho oPhezulu woLawulo lweM
Umgangatho ophezulu kunye neXabiso eliPhezulu le-4 USB + 1TYPE-C El ...
Umgangatho ophezulu kunye nexabiso eliPhezulu leMibala ye-10A ...